Theresa May: Maxaa iska badalaya noloshaada, haddii aad ka tagto xilka? - BBC News Somali
Theresa May: Maxaa iska badalaya noloshaada, haddii aad ka tagto xilka?
24 Luulyo 2019
Waxaa ku soo mareysa maalin aad Ra'isalwasaare tahay, maalinta xigtana aadan ahayn xil oo dhan.
Boris Johnson ayaa xilka Ra'isalwasaaranimada kala wareegaya Theresa may, sacada kaddib marki uu ku guuleystay hoggaanka xisbiga Muxaafidka ee Conservative.
Dhawrkii sano ee la soo dhaafay waxay Theresa may ku mashquulsanayd shirar, wax qorid iyo hoggaaminta dalka Britain oo dhan.
Haddaba maxaa dhacaya haddii ay arrimahaasi oo dhan markeli ah wada istaagaan?
Image caption Theresa May iyo Boqoradda Ingiriiska
Maalintii ugu dambeysay xilka Theresa May, waxay ka jawaabeysaa su'aalaha baarlamaanka, waxayna la kulmeysaa boqoradda.
Inkasta oo qorshaha iscasilaadda Theresa May ay ku dhawaaqday bishii May, haddana waxay iscasilaaddeeda si rasmi ah ugu hor dhawaaqeysaa boqoradda Ingiriiska iyada oo kula kulmeyso Qasriga Buckingham.
Haddii ay nasiib leedahay waxay boqoradda shaqsi ahaan guddoonsiineysaa hadiyad. Ra'isalwasaarihi hore ee Britain, Gordon Brown mar uu boqoradda la kulmay waxaa hadiyad ahaan loo guddoonsiiyey sawirka qoyskiissa oo boqradda saxiixeeda uu ku yaallo.
Haddaba Theresa May marka xilka lagala wareego waxa ugu horreeyo oo ay sameyn doonto muxuu yahay?
Waxaa dhici karta iney raacdo waddadi ay mareen Ra'isalwasaarayaal hore oo xilka ka tagay.
Wadahadal u furmay Britain iyo Midawga Yurub
Hal milyan qof oo saxiixday dalab Trump looga joojinayo inuu booqdo Britain
Waan ognahay waxa ugu horreyso oo ay Theresa may sameyn doonto waa iney si fiican u seexato, Gordon Brown marka uu xilka wareejiyey, wuxuu David Tennant ku yiri "aad baad u daallan tahaye xoogaha soo yara seexo".
Ama waxay noqon doontaa mid xiiseyso isla-markaana ciyaarto Cricket-ka, taasoo inta badan Ra'isalwasaarayaal horay xilka uga tagay ay sameeyeen.
Wuxuuna yiri "waa wakhtigii qadada iyo ciyaarta cricket".
Image caption Gordon Brown wuxuu sheegay xil ka tagidda inuu isbeddel aad u weyn yahay
Bal qiyaas waxa dhici kara haddii maalin keli gudaheed inaad weydo shaqadaada iyo gurigaaga.
"Waa ruwaad quruxsan" ayuu yiri Gordon Brown.
"Dalka Britain marka aad joogto, oo aad damacdo inaad meel aaddo ma waayeysid xilka aad heysay oo keli ah, balse waxaad habeen ka ugu horreeya ku waayeysaa gurigaaga, waxaana kugu adkaaneyso inaad bulshada sidaadi hore si ka duwan isugu soo bandhigto".
Theresa May muddo seddex sano ah waxay ku nooleyd qasri ku yaalla Downing Street, waxaana si weyn u soo dhaweeyey siyaasiyiinta caalamka ugu waweyn oo ay ka mid yihiin Donald Trump iyo Jacinda Ardern.
Haddaba, guryihii ay seddexda sano ku jirtay Mrs May, waxay kala baxeysaa alaabteeda iyada oo u guuri doonta gurigeedi caadiga ah ee ku yaalla Maidenhead oo ay seddex sano ka hor ka soo guurtay.
Ku soo laabashada nolosha caadiga ah?
Waxaan sidaa oo kale eegeynaa booliska tirada badan oo goorwalba ku hareereysnaa si ay u ilaaliyaan amnigeeda.
Haddaba, maxaa qofka ku dhacaya haddii shaqa sare uu ka tago?
Ra'isal Wasaarayaashii xilka kaga horreeyey, sida Tony Blair iyo David Cameron, waxay ahaayeen kuwo si adag ammaankooda loo ilaaliyo xitaa markii ay xilka ka tageen. Theresa May waxaa sidoo kale la filayaa in la siiyo ciidama ammaankeeda ilaaliyo.
Image caption Ra'isal Wasaare May waxaa amnigeeda ilaalin jiray ciidama boolis oo aad u badan
Balse arrintaa ma ahan mid wanaagsan. Wasiirkii hore ee arrimaha gudaha, Lord Douglas Hurd, wuxuu sheegay, "ciidamadaada ilaalada ah waxay doonayaan iney marwalba ogaadaan waxa aad qabaneysid".
Marka ma ahan inaan ilawno Ra'isalwasaare inuu u baahan yahay nidaam dhammeystiran sida xoghaye, kaaliyeyaal, khubaro dhinaca teknooloojiyadda ah oo ka shaqeeyo wax walba oo ay qabaneyso kana caawiyo wax walba oo ay u baahan tahay, mar haddii uu qofku yahay mid xil weyn soo hayn jiray.
Haddaba, mas'uulka cusub waa Boris Johnson, wuxuu ku wareegayaa guriga Downing Street ku yaalla. Taasoo ka dhigan in May ay ka guureyso gurigaasi iyada oo howlaheeda gaarka ah ku dhammeysaneyso wicitaan iyo waraaqa ay dirto.
In kasta oo ay sii ahaanayso xubin baarlamaan haddana wali waxay lahaan doontaa kaaliyeyaal wax badan ka caawiya.
Seygeeda Philip, ayaana la filayaa inuu alaabta la qaado marka ay guureyso.
Image caption Theresa May oo lagu wado gaari Jaguar ah
Waxaa xusuus mudan, Ra'salwasaare wuxuu leeyahay gawaari casri oo ay dowladdu leedahay oo dalka gudihiisa meesha uu doono uu ku aado.
Si la mid ah Ra'isalwasaarayaashii xilka kaga horreeyey, waxaa la arki doonaa Ra'isalwasaare, Theresa May, oo weli lagu wado gawaarida casriga ah ee Jaguarka loo yaqaano.
Haddaba safarrada ay caalamka ku aadeyso sidey ahaanayaan?
Theresa May waxay safarradeeda dibadda u adeegsataa oo qaadda diyaaradda RAF oo aad u weyn marka ay arrimaha muhiimka ah u socoto, sida safarkeedii heshiiska ka bixitaanka midowga Yurub ee Britain.
Nasiib darro wixii hadda ka dambeeya ma isticmaaleyso diyaaraddaas, waxayna safarradeeda u adeegsan doontaa diyaaradaha caadiga ah, si la mid ah dadka shacabka ah.
Image caption Theresa May oo daawaneyso ciyaarta cricket
Haddaba maxaa xigaya?
Theresa May waxay sii haysaneysaa kursigeeda baarlamaanka, mushaarka sanadka ay qaadaneysana wuxuu noqon doonaa £79,468. Waxaa mushaarkeeda hoos loo dhigayaa illaa boqolkiiba 50.
Waxaana laga filayaa iney buug qorto. Waa sida ay sameeyeen xubnihii xilka kaga horreeyey ee Tony Blair iyo Gordon Brown.
Ama iney gabi ahaanba ay doorbiddo iney siyaasadda isaga baxdo oo ay u go'do daawashada ciyaarta Cricket.
Maqal Xaaladda qoysaska Soomaaliya ah ee ku nool Britain
David Cameron oo iska casilaya xildhibaanimada baarlamaanka Britain
Britain oo Sucuudiga ka dalbatay sharraxaad ku aaddan arrinta Khashogg